The Great (Season 1) အပိုငျး (၁၀) | MM Movie Store
ဒီတခါတော့ Hulu ကနေ လှငျ့ထားတဲ့ The Great ဆိုတဲ့ Mini series လေးကို တငျဆကျလိုကျပါတယျ။ဇာတျလမျးကတော့ Comdey အမြိုးအစားဖွဈပွီးIMDB မှာ 7.9 နဲ့ RT မှာ 80%ထိရထားတဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။ပထမဆုံးပွောရမှာကတော့ မငျးသမီးက Elle Fanningပါပဲ။
Super 8 ထဲက ကလေးမလေးက Maleficent 12နဲ့ အောငျမွငျလာခဲ့ပွီးအခုလှမျးနတေဲ့သူတှအေတှကျ The Great နဲ့ ထှကျပျေါလာပွနျပါပွီ။မငျးသမီးကတော့ ဟုတျပါပွီ မငျးသားကရော။ဟုတျကဲ့ မငျးသားကတော့ Worm Bodies တို့ Jack:Giant SlayerရယျX-menကားတှထေဲလညျး ပါတဲ့ Nicholas Hoult ပါပဲ။
အပွငျမှာတကယျရှိတဲ့ ရုရှားဧကရီ Catherine The Great ရဲ့အကွောငျးကိုကြောရိုးလေးယူပွီး Comdey အနနေဲ့ရိုကျထားတာပါ။
Comedy ဆိုပမေယျ့ 18th ရာစုဝနျးကငျြမှာဖွဈတဲ့အတှကျအမြိုးသမီးတှကေို ခှဲခွားဆကျဆံမှုတှအေကွောငျးတှအေဲဒီခတျေမှာ အမြိုးသားတှကေ အမြိုးသမီးတှကေိုဘယျလိုသဘောထားတယျဆိုတာတှကေိုပါ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ဇာတျလမျးကတော့ လာလာခွငျးမှာပဲ Catherine က Peter III ကလကျထပျဖို့ ထှကျခှာလာတာနဲ့ စပါတယျ။
အငျပါယာကွီးတခုရဲ့ ဧကရာဇျကို လကျထပျရမယျ့မိနျးကလေးတယောကျ ရဲ့လကျဆောငျကတော့ ထငျးရှူးရှကျလေး တခုပါပဲ။သူနဲ့ ဧကရာဇျရဲ့ အခဈြဟာ မီးကြီး မီးပှားလေး တခုကနေ အရှိနျပွငျးပွငျးတောကျလောငျလာပွီးနိုငျငံတျောကွီး တခုလုံးကို အလငျးပေးနိုငျလောကျတဲ့အထိတောကျပအောငျဖွဈစခေငျြပါသတဲ့။
ဧကရာဇျကတော့ ကဗြာဆနျပါရဲ့လား။အရငျကပို့ခဲ့တဲ့စာတှကေတောငျ သူပို့တာ မဟုတျပါဘူးတဲ့။အဲလိုနဲ့ မင်ျဂလာပှဲကငျြးပပွီး မင်ျဂလာဦးညကို စိတျကူးယဉျနတေဲ့မိနျးကလေးတယောကျရဲ့ ဧကရာဇျရဲ့ လကျထပျမှုအပျေါထားတဲ့သဘောထားတှဖေျောပွရငျး မင်ျဂလာဦးညကိုပုံဖျောထားခဲ့တယျ။
ပွငျသဈကို စိတျဝငျစားတာခငျြးတူကွပမေယျ့ပွငျသဈနောကျဆုံးပျေါဖကျရှငျတှကေို စိတျဝငျစားတဲ့ နနျးတျောကအမြိုးသမီးတှနေဲ့ မတူကှဲပွားစှာ Catherine ကတော့ပွငျသဈအတှေးအချေါပညာရှငျတှရေဲ့ စာပတှေကေိုသာ စိတျဝငျစားဖတျရှုသူပါ။သူတို့က စာတောငျ မဖတျတတျကွဘူး။
နောကျထပျသူတို့စိတျဝငျစားတာကတော့ အိမျထောငျရေး အတငျးအဖငျြးတှပေဲ။နနျးတျောကအမြိုးသမီးတှရေဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ သူတို့ရဲ့ပြျောစရာကစားနညျးတှကေအစCatherine နဲ့ ကှဲပွားနခေဲ့တော့တယျ။အဲလိုနဲ့ Catherine ရဲ့ သညျးခံနိုငျမှုတှေ ကုနျဆုံးလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာ ဆုံးဖွတျခကျြတခုကို ခလြိုကျတော့တယျ…….
Elle လေးရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတာလေးတှနေဲ့တငျတနျနပေါပွီ။ဟာသတှကေလညျး ပွောတာတှေ ရယျနရေတယျ။အရမျးကွီးရယျရအောငျ လုပျထားတာမဟုတျပဲနဲ့ သူ့နရောနဲ့သူ ထညျ့ထားတယျ။ဧကရာဇျကလညျး ရုပျတညျကွီးနဲ့ ဟာသတှလေုပျ စလာလာခွငျးကတညျးကသူနဲ့ယူမယျ့သူကို စနောကျနတော။
သူတယောကျနဲ့တငျ ရယျနရေတယျ။စကားလုံးတှကေတော့ နညျးနညျးကွမျးတာတှပေါပါတယျ။ကဲ ကွညျ့ရှုခံစားလိုကျပါအုံး
ဒီတခါတော့ Hulu ကနေ လွှင့်ထားတဲ့ The Great ဆိုတဲ့ Mini series လေးကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့ Comdey အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးIMDB မှာ 7.9 နဲ့ RT မှာ 80%ထိရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ပထမဆုံးပြောရမှာကတော့ မင်းသမီးက Elle Fanningပါပဲ။
Super 8 ထဲက ကလေးမလေးက Maleficent 12နဲ့ အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးအခုလွမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက် The Great နဲ့ ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါပြီ။မင်းသမီးကတော့ ဟုတ်ပါပြီ မင်းသားကရော။ဟုတ်ကဲ့ မင်းသားကတော့ Worm Bodies တို့ Jack:Giant Slayerရယ်X-menကားတွေထဲလည်း ပါတဲ့ Nicholas Hoult ပါပဲ။
အပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့ ရုရှားဧကရီ Catherine The Great ရဲ့အကြောင်းကိုကျောရိုးလေးယူပြီး Comdey အနေနဲ့ရိုက်ထားတာပါ။
Comedy ဆိုပေမယ့် 18th ရာစုဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအကြောင်းတွေအဲဒီခေတ်မှာ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာတွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့ လာလာခြင်းမှာပဲ Catherine က Peter III ကလက်ထပ်ဖို့ ထွက်ခွာလာတာနဲ့ စပါတယ်။
အင်ပါယာကြီးတခုရဲ့ ဧကရာဇ်ကို လက်ထပ်ရမယ့်မိန်းကလေးတယောက် ရဲ့လက်ဆောင်ကတော့ ထင်းရှူးရွက်လေး တခုပါပဲ။သူနဲ့ ဧကရာဇ်ရဲ့ အချစ်ဟာ မီးကျီး မီးပွားလေး တခုကနေ အရှိန်ပြင်းပြင်းတောက်လောင်လာပြီးနိုင်ငံတော်ကြီး တခုလုံးကို အလင်းပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိတောက်ပအောင်ဖြစ်စေချင်ပါသတဲ့။
ဧကရာဇ်ကတော့ ကဗျာဆန်ပါရဲ့လား။အရင်ကပို့ခဲ့တဲ့စာတွေကတောင် သူပို့တာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အဲလိုနဲ့ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီး မင်္ဂလာဦးညကို စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ ဧကရာဇ်ရဲ့ လက်ထပ်မှုအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားတွေဖော်ပြရင်း မင်္ဂလာဦးညကိုပုံဖော်ထားခဲ့တယ်။
ပြင်သစ်ကို စိတ်ဝင်စားတာချင်းတူကြပေမယ့်ပြင်သစ်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ နန်းတော်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ မတူကွဲပြားစွာ Catherine ကတော့ပြင်သစ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေရဲ့ စာပေတွေကိုသာ စိတ်ဝင်စားဖတ်ရှုသူပါ။သူတို့က စာတောင် မဖတ်တတ်ကြဘူး။
နောက်ထပ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတာကတော့ အိမ်ထောင်ရေး အတင်းအဖျင်းတွေပဲ။နန်းတော်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ပျော်စရာကစားနည်းတွေကအစCatherine နဲ့ ကွဲပြားနေခဲ့တော့တယ်။အဲလိုနဲ့ Catherine ရဲ့ သည်းခံနိုင်မှုတွေ ကုန်ဆုံးလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ချလိုက်တော့တယ်…….
Elle လေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာလေးတွေနဲ့တင်တန်နေပါပြီ။ဟာသတွေကလည်း ပြောတာတွေ ရယ်နေရတယ်။အရမ်းကြီးရယ်ရအောင် လုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူ ထည့်ထားတယ်။ဧကရာဇ်ကလည်း ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဟာသတွေလုပ် စလာလာခြင်းကတည်းကသူနဲ့ယူမယ့်သူကို စနောက်နေတာ။
သူတယောက်နဲ့တင် ရယ်နေရတယ်။စကားလုံးတွေကတော့ နည်းနည်းကြမ်းတာတွေပါပါတယ်။ကဲ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါအုံး
The Good Doctor (Season 4) ၊အပိုငျး (၆)